के गर्ने छिन विश्व सुन्दरीले नेपालमा ? | Nepalkakura
Home गृहपृष्ठ मनोरञ्जन के गर्ने छिन विश्व सुन्दरीले नेपालमा ?
के गर्ने छिन विश्व सुन्दरीले नेपालमा ?
२२ फागुन, काठमाडौं । विश्व सुन्दरी टोनी एन सिंह बिहीबार नेपाल आइपुगेकी छन् । मिस नेपाल आयोजक हिड्न टेजर र पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा मिस वर्ल्ड–२०१९ कि विजेता टोनी पहिलो पटक नेपाल आएकी हुन् ।
उनीहरुले बिहीबार नै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई पनि भेटेका छन् ।
भेटमा मिस वर्ल्ड २०२० नेपालमा सम्भव भए नभएको विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो । ‘सरकार आयोजक हुने होइन, समन्वय गर्ने हो’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले तपाईहरुले भेन्यू हेर्नुस्, लोकल आयोजकहरुसँग छलफल गर्नुस् र, उपयुक्त प्रस्ताव ल्याउनुस् भन्नु भएको छ ।’
मन्त्रालयका अधिकारीहरुकाअनुसार यो सौन्दर्य प्रतियोगिता नेपालमा गर्न सम्भव छ छैन भन्ने भन्ने बुझ्न आयोजक संस्थाकी अध्यक्ष मोर्ली आफैं आएकी हुन् । तर प्रारम्भिक छलफलमै रहेकाले मिस वर्ल्ड २०२० नेपालमा हुने नहुने भन्न गाह्रो छ ।
विश्व सुन्दरी टोनीले भोलि शुक्रबार त्यो प्रोजेक्टको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यो परियोजनामार्फत् सोलसिंङ गाउँका १४० घर परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक सबलीकरणमा काम भइरहेको अनुष्काले बताएकी छन् ।
स्तै पूर्व मिस नेपाल श्रृंखलाले चेपाङ वस्तीमा सञ्चालन गरेको प्रोजेक्ट पनि अवलोकल गर्ने कार्यक्रम छ । २०१८ को मिस वल्र्डमा शीर्ष पाँचमा पुगेकी उनको त्यो प्रोजेक्टले पनि मल्टिमिडिया अवार्ड हात पारेको थियो ।
Previous articleमास्क महँगोमा बेचेको वा लुकाइएको पाइएमा कारवाही उजुरीका लागि फोन नम्बर ११३७
Next articleवि.सं.२०७६ साल फाल्गुन २३ गते शुक्रबारको राशिफल